Wesdar K39 Bluetooth Speaker (Black) ~ ICT.com.mm
HomeWesdar K39 Bluetooth Speaker (Black)
Wesdar K39 Bluetooth Speaker (Black)
Wesdar အမှတ်တံဆိပ် K39 Bluetooth Speaker (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ Output Power:5W ရှိပြီး အရွယ်အစား 53 mm ရှိ Loud Speaker အမျိုးအစား စပီကာနှစ်လုံးကို တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် အသံပါဝါ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ Bluetooth စပီကာ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည်ကို အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တဲ့ သာမိုပလတ်စတစ် ပိုလီမာနဲ့ Fabric... [Learn more]
Brand: WesdarFilter by: Audios, Portable Bluetooth Speakers, Portable Speakers, Wireless Speakers
Wesdar အမှတ်တံဆိပ် K39 Bluetooth Speaker (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ Output Power:5W ရှိပြီး အရွယ်အစား 53 mm ရှိ Loud Speaker အမျိုးအစား စပီကာနှစ်လုံးကို တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် အသံပါဝါ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ Bluetooth စပီကာ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည်ကို အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တဲ့ သာမိုပလတ်စတစ် ပိုလီမာနဲ့ Fabric တို့ကိုအသုံးပြုပြီး တည်ဆောက်ထားတာကြောင့် အရည်အသွေးပိုင်းမှာ အထူးစိတ်ချရစေပါတယ်။ ဘတ္ထရီပါဝါ 1500mAh ရှိတဲ့ ဘတ္ထရီအမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် စပီကာကို အချိန်အကြာကြီး အသုံးပြုနိုင်စေပါတယ်။ Built-in HD အသံအရည်အသွေးရှိ microphone တစ်ခု Built-in ပါဝင်တဲ့အတွက် အသုံးပြုနေရင်း ဖုန်းဝင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာ Bluetooth စပီကာကနေတဆင့် တိုက်ရိုက်ဖုန်းပြောနိုင်ပါတယ်။ အခြား SD Card နဲ့ USB Port တွေလည်း ပါဝင်တဲ့အတွက် TF card သို့မဟုတ် USB disk ထဲက သီချင်းတွေကို တိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်စေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Materials: ABS+Fabric, Charging Method: Mirco DC 5V Charging, Battery Capacity: 1500mAh, Bluetooth Version: 4.1 JL, Frequency Response: 90Hz-20KHz, Sensitivity: 750mV, Louderspeaker Dimension: 53mm*2, Input: 5V, Output Power: 5W*2, Product Dimension: 186*78*80 mm, Net Weight: 453g
Bluetooth Mode Wireless Playing
Supporting Bluetooth mode,wireless playing song.Getting rid of the wire,more freely to use the speaker enjoying the music.
Hand-Free Calling,Easy to answer
Built-in HD microphone,supporting calling.Easy to operate,you can enjou the music or talk with friend with K39.
Supporting TF Card or USB Disk Playing
Can play songs directly with TF card or USB disk.Support the control functions like switching to previous track.